Domestic emoyeni abathwali siphile ukuphila kunzima futhi yayishubile. Isiphetho abaningi babo akulula, ngisho nezinhlekelele ezihlasimulisayo. Ngakho, "Domodedovo Airlines" eside eyakhelwe indlela yabo, wahamba ngomqanso, kodwa yaphela ngokudabukisayo ngokwanele.
Ngo-1960, iSoviet Union baqhubeka ukuvela of civil aviation. Abaklami Soviet ukudala kwendiza yabantu abangekho ukuthi akuzona eliphansi in izici zayo izimbangi entshonalanga. Fly phezu isibhakabhaka-USSR Ana, Tu futhi ILS. Ukuvela izindiza ezintsha esidinga ukwakhiwa kwamakomidi izindiza kanye zezindiza. Ngo-1960 ozalwa umbono yokwakha e-Moscow Domodedovo Airport nokuvulwa ku kwesisekelo salo yenethiwekhi. Ngakho-ke wazalwa ngo-1964 "Domodedovo Production Association of Civil Aviation". Inkampani wazalwa umdlali ngobukhulu e-traffic yasekhaya futhi emoyeni iqembu eziningi zalezi zinsuku yezwe. Mashi 25, 1964 ibhodi yayo kwenza indiza yayo yokuqala olusemthethweni kusuka eMoscow kuya Sverdlovsk.
Isisekelo Sethemba inhlangano entsha of civil aviation zaba 206, 211, 212 aircrew kusukela Vnukovo. Aircraft nezisebenzi kuqinisekiswe ukuqaliswa eside hola izindiza. wayeneminyaka engamashumi amathathu ilandelana esizayo "Domodedovo Airlines" iyona enkulu kunazo zonke emoyeni yenethiwekhi e-USSR. Belingana "Aeroflot" Domodedovo squad eyenziwa isibalo esikhulu sezithunjwa zokuthutha ezifuywayo international. Phakathi nonyaka le nkampani isilinganiso zithutha abantu abangaphezu kwezigidi ezingu-70. I isigaba njalo agcwaliswa ngamapulangwe entsha indawo futhi uye waklama ngempela kahle kuze kube sekushoneni kwelanga-USSR.
Ngo-1992, inhloko yendiza iba leonid Sergeev, kwaba emahlombe akhe babeke izinguquko ezilula ukulungiswa. Ngo-1998, onikeziwe esisemthethweni "Domodedovo Production Association of Civil Aviation" iba inkampani okuhlangene isitokwe Domodedovo izindiza, lapho u-51% amasheya ephethwe nguhulumeni. Uhulumeni eliyibiza ngoxhaxha Inkampani, ukukhiqizwa izindawo kanye motor wangaphambili isigaba. umsebenzi Ubude kule nkampani entsha okushukumisela abantu kungathi izinkulungwane ezimbili. Abaholi ukumbonga kakhulu kwakungekaNkulunkulu amadlozi. Yokudumisa obaba abaqamba squadrons wahlala izinombolo primordial. Ngakho, i-206 squad iminyaka engaphezu kwengu-55.
Ukuphathwa inkampani "Domodedovo izindiza" ukuqhubeka isiko DPO GA, okuyinto kwahluka a abasebenzi kanye namasistimu okusebenza izinqubomgomo ezinengqondo. Lokhu kwasenza sakwazi ukugcina i izinga ithimba eliphezulu zokuphila ngisho nasezikhathini ezinzima yokwakha kabusha. Inkampani yenethiwekhi njalo banakekele nesipiliyoni anqwabelene, owamsiza ukuthi ngemva kwamashumi eminyaka kwenziwa khona ukuba abe omunye izindiza esitebeleni kunazo nephephile hhayi kuphela e-Russia kodwa futhi emhlabeni. Kuyo yonke iminyaka yami "Domodedovo Airlines" kwakungekho kuphahlazeka indiza.
Azimele of the 90s hhayi zaziwubufakazi izindiza ukuzimela, kodwa futhi ishiya ikhaya Domodedovo sezindiza e inkampani ezimele. Khona-ke lokhu ukuthuthukiswa kwaba sifundo engokwemvelo ukuthuthukiswa imboni, kodwa ngaleso sikhathi kuyoba ukuba yinkimbinkimbi yezindiza.
Kukhokonke, kodwa-kwaba ngemva kwezikhathi zokulotshwa Soviet waphumelela kakhulu inkampani. Kutfutfukisa izimoto zawo futhi eyandisa ibalazwe yayo umzila, waziphatha ukuqeqeshwa ongoti abaqeqeshiwe. Kathathu Airline "Airlines Domodedovo" waklonyeliswa ohlonishwa umklomelo kazwelonke "Wings of Russia" ngo-1999, 2000 no-2001 - njengoba yezindiza konyaka, eyayintula ivolumu traffic ezindizeni zasekhaya ezingaphezu kuka-1 bhiliyoni RMB.
Ngo-2004, le nkampani uye yabakhanga osomabhizinisi ezinkulu - Abramovich abafowethu bathenga 49% esigxotsheni ngokusebenzisa yezindiza zayo "KrasAir" bese beveza iziphakamiso phezu kabusha "Airlines Domodedovo". Ngawo lowo nyaka ka "Airlines Domodedovo" engena isivumelwano sokuba nguzakwethu nenkampani "KrasAir", "Omskavia", "Sibaviatrans" futhi "Samara". Ngakho kukhona Russian yezindiza umbimbi AiRUnion. Ukukhulisa ukuvumele izinkampani yokuqinisa ukwandisa impukane imikhumbi ikhadi, kwandziswa kwelinani letikhungo abagibeli. I-Alliance aqhubeka silondoloze isabelo khona yembuso inkampani, kodwa lancipha 45%. Ngo-2007 AiRUnion wangena ohlwini kwamabhizinisi wezwe zamasu.
Ngo-2005 inkampani wavula indawo yayo lapho ungakwazi ngqo ukuthenga amathikithi endiza.
Ezinsukwini zokuqala of lasungulwa Domodedovo isigaba wagxilisa izimpahla zasekhaya, inkampani kwadingeka ukuba nezimfuno elikhulayo izakhamuzi ngoba ezihambayo phezu zwe elikhulukazi. Kodwa Ukusabalala kancane kancane lwesifundo, inkampani ingena ezingeni lomhlaba wonke jikelele.
Ngu 2008 "Domodedovo Airlines" indiza isiqondiso ezimila kuphela, esehlanganise yonke iYurophu, Asia nase-Afrika. Kuhleliwe futhi inkonzo charter emoyeni iqiniswe Ekude, eSiberia naseMpumalanga Imizi yaseningizimu yezwe, lithi we eduze phesheya, kanye Spain, Indonesia, iMalaysia, iNdiya, Thailand, China, Portugal, lonke umbimbi landizela emazweni angaphezu kuka amabili.
Njengoba sekuzoqala indalo yayo, "Domodedovo Airlines" ayenendawo lamadolobha esimanjemanje kakhulu ngesikhathi indiza:
- Tu-114. Indiza abadumile Soviet lokufeza eside hola izindiza. Izikhungo inikezwa baba izigaba ezimbili: eyokuqala - emithathu gumbi, kwesibili - nokucwala nge kwezihlalo. Le ndiza kwaba iqhawe isikhathi sakhe; kuyisifo esheshayo futhi ngobukhulu turboprop ibhodi emhlabeni.
- Tu-154. Soviet izindiza osindile, esebenza iminyaka engaphezu kwengu-40. Lona izindiza okudume kakhulu injini jet eSoviet Union, wakhonza kuze kube sekupheleni kwekhulu lama-20, bese-ke waqala bakamalalahlengezela siyeke inkonzo.
- IL-62. Ethandwa kakhulu ngempumelelo kwaba model of IL-62, "Domodedovo Airlines" babephakathi eSoviet operation wokuqala InterContinental ebhodini nge injini jet, bamshiya kuphela 90s.
- Il-96-300. Kwaqashwa Soviet ububanzi-ibhodi for the eside hola. Kuyinto kule imodeli abangu yaziswe izindiza, isibonelo, "eMoscow - Petropavlovsk-Kamchatsky - eMoscow".
Ngasekupheleni kwawo-90-yalolucwaningo esiphathiswa emoyeni kuhlelwe sesimanje bese esikhundleni yemikhumbi nemishini ngaphezulu yesimanje, kodwa izinhlelo ezingazange zifinyelelwe.
Airline "Domodedovo Airlines" ekuqaleni yakhelwe usebenze sezindiza efanayo, okuyinto wavulwa eminyakeni emibili ngaphambili. Isikhumulo sezindiza bezilokhu zihlukaniswa yokuthi yavuleka futhi olwesimanje. Domodedovo yadalelwa isevisi ngokuyinhloko izindiza yasekhaya, kodwa yi-90 th ngonyaka ngamazwe izindawo ithole endaweni yayo ihholo elisha.
Ngo-1992, Domodedovo uthola isimo esemthethweni sezindiza zamazwe ngamazwe. Ngemva kabusha, inkampani kuba yangasese, inkathi zezimbali iqala. Ekupheleni kwekhulu lama-20 bafeza sesimanje ebanzi nokwenza umsebenzi wokuvuselela izakhiwo into, ke kakhulu kwandisa throughput, futhi ngo-2003 okuthiwa Domodedovo kwekulu phakathi namakhulu zezindiza emhlabeni jikelele.
Kuze kube manje, Domodedovo - kuyinto eziyinkimbinkimbi yesimanje kwi umsebenzi wathatha indawo lamashumi amabili e-Europe kanye eyesithathu - eRussia. Ngo-2006, iziphathimandla sezindiza kuncike audit esiqinile futhi usayine olandelwayo lokuvikeleka-United States naseYurophu. Ngezinye eyenziwa ngaso leso sikhathi Domodedovo ezimbili. Eyokuqala has a enamathela esiyingqayizivele eRussia. Ngo-2008, thina wasungula wemithwalo okuzenzakalelayo ukuhlunga umugqa esikhumulweni sezindiza, lapho yashesha kakhulu inqubo isevisi umgibeli.
Ngo-2011, Domodedovo umgibeli traffic kudlulwe abantu abayizigidi ezingu-25.
Kwakhe kweminyaka engu-50 iminyaka engu-Domodedovo kugujwa ngaphandle umlingani nomngane yezindiza "Domodedovo Airlines", okwasiza okuningi ngesikhathi sakhe entuthukweni ukusungulwa sezindiza.
Ikhodi cabin crew
Ukuze izindiza ezinkulu izinga ebaluleke kakhulu inkonzo, okuyinto unomthwalo indiza zesifazane, hhayi okuhlukile - "Domodedovo Airlines". Flight zesifazane, isithombe okungase ukuhlobisa umagazini ecwebezelayo - ukuziqhenya yezindiza.
Stewardesses "Airlines Domodedovo" babegqoke ophuzi-isihlabathi amasudi nge uwumnikazi wenkampani kanye jackets kanye ihembe elimhlophe, isikhafu iboshelwe entanyeni yakhe kule scheme efanayo. Ikhodi sezikhonzi indiza kwaba ukuthi umsebenzi wabo - wukuqinisekisa induduzo abagibeli ngesikhathi indiza. Futhi ahlonishwe ke lwenteke - ezindizeni ka "Airlines Domodedovo" njalo wanqoba umusa, ukunakekelwa kanye nobungane.
Crisis of 2008 ngonyaka ishayé AiRUnion, ngo-August kulo nyaka, isikweletu isamba izindiza lolu mbimbi kwaba $ 1 billion. Ngakho-ke abathintekayo obumbi bomnotho yenkampani kanye ukwanda kokutheleleka kudlange kakhulu amanani kaphethiloli. Kusukela ngoJulayi waqala ukubambezeleka abasebenzi amaholo. Agasti 20, 2008 waqala ukubambezeleka okukhulu nokukhansela izindiza emoyeni yenethiwekhi, inkampani bafaka icala ku ukuqashelwa ucabanga. Ngo-February 2009, ilayisensi yokusebenza Ubuyise yenethiwekhi. Umqondisi odlule kwaba Sergey Yanovoy.
Ngo-February 2009, kuwo saphela isinyathelo JSC. Airline "Domodedovo Airlines" uye abasekho. Wayengakwazi ukuphila ngokuvumelana eminyakeni engamashumi ayisihlanu ayo esenzeka ngalo unyaka wonke.
Inkundla yezindiza yaseRamenskoye: incazelo nemisebenzi
"Formidron": ukubuyekezwa kodokotela neziguli mayelana izidakamizwa. ngempumelelo kangakanani?